Pyae Phyo (MMiTD): May 2013
ဇော်ဂျီ နဲ့ Unicode Font မလိုဘဲ မြန်မလိုဖတ်နိုင်တဲ့Browser4MM v1.2 For Android
အခုအသစ်ထွက်တဲ့ Browser လေးကတော့ ဇော်ဂျီ နဲ့ ယူနီကုတ်မရှိလည်း Internet က စာသားတွေကို
မြန်မာလိုကောင်းမွန်စွာဖတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခု Browser လေးကို 1st Myanmar Group ကရေး
သားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခု Browser လေးမှာ မြန်မာဖောင့် မမှန်တာတွေလည်း မဖြစ်တော့ပါဘူး
Zawgyi ရော Unicode ကိုပါ support လုပ်တဲ့အတွက် Internet ပေါ်မှာ သတင်းတွေဖတ်သူများအတွက်
အကြိုက်တွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခု Browser ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် Root ဖောက်စရာလည်းမလိုပါ
ဘူး။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာသာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ မြန်မာလိုဖတ်လို့ရတယ်
ဆိုတာက Internet နဲ့ Web Page တွေပေါ်မှာဘဲ ဖတ်လို့ရမှာပါဗျာ။
အမျိုးအစား: Android , Android Application
CCleaner Professional and Business Edition v4.02.4115 + Crack
ကွန်ပြူအတွက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတဲ့ Software တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာတော့ CCleaner
ကလူသုံးအများဆုံးနဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး Cleaner တစ်ခုပါဘဲ။ အခုလည်း Version အသစ်ထွက်လာလို့
CCleaner ချစ်သူများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Professional နဲ့ Business Edition ဆိုပြီး Version
နှစ်မျိုးစလုံးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။သက်ဆိုင်ရာအတွက် Crack တွေကိုပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ချက်ကိုခြုံပြီးပြောရရင်တော့ တံမြတ်စည်းဆိုတဲ့အတိုင်းဘဲ ရှင်းလင်းသင့်တဲ့ ရှင်းထုတ်လို့ရ
တဲ့ အရာမှန်သမျှကို အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်ဆန်ဆုံးရှင်းထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်
အမျိုးအစား: Cleaner , Software
iCare Data Recovery (Professional & Enterprise) v5.1 + Key
Data Recovery တွေအများကြီးရှိပါတယ် အဲဒီအထဲကမှ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ကတော့ iCare Data Recovery Software ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်း အကြောင်းအရင်းရှိလို့ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့ကိုယ်တွေ့ မှားဖျက်မိတဲ့ Data တွေကို 100% အထိ ပြန်ရယူပေးနိုင်တာ အကြိမ်ပေါင်းမနည်း
တော့ပါဘူး။ Data Recovery ဆိုတာကတော့ ကွန်ပြူတာတိုင်းမှာ ရှိထားသင့်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီကောင်လေးက Internal Hard Disk , External Hard Disk , USB , Memory Card အစရှိတာတွေထဲက
Data တွေကို Recovery ပြန်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ NTSF , FAT , FAT32 အားလုံးကို Support လုပ်ပေး
RegawMOD EVO 4G LTE Rooter သုံးပြီး HTC EVO 4G LTE ကို Root နည်း
RegawMOD EVO 4G LTE Rooter သုံးပြီး HTC EVO 4G LTE ကို Root လို့ရတဲ့နည်းလေး မျှဝေချင်ပါတယ်..
ပထမဆုံး လိုအပ်တာလေးတွေ. ဒေါင်းပါ..
1. RegawMOD EVO 4G LTE Rooter For 32bit HERE or HERE
RegawMOD EVO 4G LTE Rooter For 64bit HERE
2. HTC Driver
3. .Net Frame 4.0
ဒေါင်းပြီးသွားရင်.. Driver နဲ့ .Net 4.0 မရှိသေးသူက Install လုပ်လိုက်ပါအုံးနှော်..
1. ကိုယ့် Windows OS အလိုက် RegawMOD EVO 4G LTE Rooter For 32bit (သို့မဟုတ်) RegawMOD EVO 4G LTE Rooter For 64bit ကို Run ပါ..
2. ဖုန်းကို USB Debugging နဲ့ Unknown Source ကို On ထားပြီး USB ကြိုးသုံးကာ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ..
3. Driver ကိုသိတယ်. ဆိုရင် Computer မှာ ဖုန်းပုံတက်လာပြီး အဲဒီထဲမှာ ROOT ME ဆိုပြီး ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. အဲဒီမှာ Warning တွေ တက်လာနိုင်ပါတယ်.. USB Debugging ကို On မထားတာတို့. Driver မသိတာတို့ပေါ့ဗျာ.. အားလုံး သိတယ် . ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်.. သူ့အလိုလိုလုပ်သွားပါလိမ့်မယ်.. နောက်ဆုံး ပြီးခါနီးလေးမှာ Root ပြီးကြောင်းကို Warning တက်သလို တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်.. ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါ.. ဖုန်းပုံမှာ အစိမ်းရောင်စာတွေ အလုပ်လုပ်ရင်း နောက်ဆုံးတော့ အားလုံးပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်..
Posted by Maung Pauk
Satan’s Zombies v1.3.3.2 For Android Game
Satan’s Zombies ဂိမ်းမှာ သင်ဟာ မကောင်းဆိုးဝါး zombie တွေရဲ့လက်ထဲကနေ အသက်ရှင်လွတ်မြောက် အောင်ထွက်ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတလျှောက် ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်ပြီး လမ်းမှာတွေ့သမျှ ရန်သူ မ ကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်သွားရမှာပါ။ မကောင်းဆိုးဝါးကောင်တွေက သင့်ကို အသည်းအသန်လိုက်လံသတ် ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပြီး သင်ကသူတို့တွေကိုသေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ချေမှုန်းရမှာပါ။ ဆိုင်ကယ်ကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ထိန်းမောင်း ရင်း သေနတ်ပစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆိုင်ကယ်ထိန်းတာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုပါတယ်။ လမ်းမကြီးတလျှောက်မှာ မကောင်းဆိုးဝါး တွေအပြင် တခြားအတားအဆီးတွေကိုလည်း ၀င်မတိုက်မိအောင် ရှောင်ရှားနိုင်ရအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အတားအဆီးတွေက ရှုပ်ထွေးများပြားတဲ့အတွက် ဆိုင်ကယ်မောင်းရတာ တော်တော်လေးအန္တရာယ်များမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြိုင်ဘက် ဆိုင် ကယ်သမားတွေကလည်း သင့်ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က သင့်ကိုဆိုင်ကယ်ချင်း ဘေးချင်းယှဉ်ဝင် တိုက်ဖို့ကြိုးစားတာကို ရှောင်ရှားပြီး၊ သူတို့ကို ဆိုင်ကယ်မှောက်သွားအောင် ခြေထောက်နဲ့ကန်ကျောက်တာတွေလုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။ တခြား မကောင်းဆိုးဝါးဂိမ်းတွေလိုပဲ အဆုံးမရှိပြေးလွှားရမယ့် Endless runner ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဒီဂိမ်းမှာ က ပိုမိုပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းပြီး၊ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သွေးထွက်သံယိုမှုတွေအများကြီးကိုကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ရန်သူမ ကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ပစ်ခတ်ရာမှာအသုံးချဖို့အတွက် သေနတ်တွေထည့်ပေးထားပါတယ်။ မကေင်းဆိုးဝါး zombie တွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ရင်းနဲ့ ပြိုင်ဘက်ဆိုင်ကယ်သမားတွေကိုလည်း ဖြတ်ကျော်အနိုင်ယူသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းမ ကြီးတလျှောက် မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့လက်ထဲကနေလွတ်မြောက်အောင် ဆိုင်ကယ်မောင်းပြီးအသက်လုပြေးရတာ တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ graphic အရည်အသွေးနဲ့ အသံဖန်တီးမှုတို့ကြောင့် ဂိမ်းကစား ရတာ ပိုမိုအသက်ဝင်လှပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကိုကစားချင်တယ်ဆိုရင် Android 2.1 နဲ့အထက်ဖုန်းတွေမှာကစားနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား: Android , Android Game
Universal Document Converter v5.7.1305.21160 + Keygen
Universal Document ကတော့ ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Software တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလည်းဆိုတော့
ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ ရုံးစာတွေ ပုံတွေ စတာတွေကို PDF , JPG , စတာတွေအနေနဲ့အပြန်အလှန် ပြောင်းလည်း
ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြရရင် Excel , Word , Power Point စတာတွေနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့
File တွေကို JPEG , PDF စတာတွေကို အလွယ်တကူပြောင်လဲပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ရုံးလုပ်ငန်းတွေတင်မ
ကပါဘူး နေရာတော်တော်များများမှာ အသုံးတည့်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အမြဲတမ်းသုံးပြုနိုင်အောင်
Document Sharing and Archiving
Exchanging documents in the Adobe PDF format protects you and your clients from any technical difficulties. Read more...
Documents converted to JPEG or PNG graphic formats can be easily inserted into your PowerPoint presentations without any problems. Read more...
Publishing presentation materials and product catalogs in the Adobe PDF format offers clients all needed information inareliable and change-protected form. Read more...
Preparing Layouts for the Printshop
Converting documents into the TIFF format guarantees high printing quality and simplifies work with printshops and publishers. Read more...
Corporate Workflow System Deployment
Universal Document Converter reduces your expenses on the development ofacorporate workflow system.
အမျိုးအစား: Converter , Editing , Software
Uniblue SpeedUp My PC 2013 v5.3.8.0 Multilingual + Serial Key
မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာ Model နိမ့်လို့ နှေးကွေးလေးလံနေသူများအတွက် ကွန်ပြူတာရဲ့ Speed ကိုအကောင်း
ဆုံးမြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ Uniblue SpeedUp My PC 2013 v5.3.8.0 နောက်ဆုံးထွက် Version ကိုမျှဝေပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Model နိမ့်တဲ့ စက်တွေကိုတောင်မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် အမြင့်တွေကိုသာထပ်ပြီး
မြှင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ရှယ်ဘဲပေါ့နော်။ Speed Up Software တွေကို ခဏခဏတင်ပေးနေကြဖြစ်နေ
အမျိုးအစား: Software , Speed Up PC
USB တွေကို Format ရအောင်ချပေးမယ့် USB Flash Drive Force Format Tool
ဒီကောင်လေးက တော်တော်ကောင်းတာဗျို့.. ခုပဲ တစ်ခု စမ်းလိုက်တာ.. အဆင်ပြေတယ်.. ဒါကြောင့် တင်ပေးလိုက်ပါတာပါ.. ဒီကောင်ကို Run လိုက်.. Drive ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့် USB Driver ကိုရွေး.. Start ကိုနှိပ်.. Quick ကိုရွေးလို့လဲရတာပေါ့ဗျာ.. ကဲ အဆင်ပြေပြီမဟုတ်လား.. Install လုပ်စရာတောင် မလိုဘူး.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 29.9 KB ပဲရှိတယ်..
အမျိုးအစား: Software , USB Software
မိမိတို့ရဲ့ USB ကို password နဲ့ လုံလုံပိတ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ GiliSoft USB Stick Encryption ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်..
Download : 2.18 MB
Compress ဖိုင်အမျိုးအစားပေါင်း (၂၀) ကျော်ကို Unpak လုပ်နိုင်တဲ့ Black Hole (.BH) Free
မထင်မှတ်ဘဲ ဖိုင်အမျိုးအစားတစ်ခု တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မတွေ့ခဲ့ဖူးပါဘူး.. ဖိုင်အမျိုးအစားက (*.bh) ဖြစ်ပါတယ်.. ရှာကြည့်တော့ Encrypt Compressed File တဲ့ .. ဒါဆို Rar, Zip တို့လို ဖိုင်အမျိုးအစားပေါ့.. ဒါနဲ့ပဲ. Black Hole (.BH) ဆိုတဲ့ Software တစ်ခုကို တွေ့လာခဲ့တာပါ.. ဒီ Software က BH, ZIP, ZIPX, 7-ZIP, CAB, LHA, TAR, GZIP, ISO ဖိုင်တွေကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး အဲဒီ BH, ZIP, ZIPX, 7-ZIP, CAB, LHA, TAR, GZIP, ISO အပါအဝင် ထင်ရှားတဲ့ Archiver [Compress Software] အမျိုးအစားပေါင်း (၂၀) ကျော်ကို ဖြည်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. Windows အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်လည်းဖြစ်ပါတယ်..
BH Free Archiver supports innovative Black Hole (.BH) format, that allows you to create 20-40% smaller archives comparing to .ZIP format.
Full Windows 8, 7, Vista and Windows XP Support, UAC and VSS;
Most Advaced ZIP/ZIPX Engine, and superior RAR extraction;
Multiple Formats Support Including BH, ZIP, ZIPX, 7-ZIP, CAB, LHA, TAR, GZIP, ISO.
Create BH, ZIP, ZIPX, TAR/GZ/BZ2, CAB, ISO, open 20 other formats. Full Windows 7/8 support with UAC elevation and VSS! FIPS 140-2. Multicore compression and fastest RAR extraction.
Download : 1.09 MB
အမျိုးအစား: Compressor , Software
Netguide Journal Vol (2), Issue (86) (29.5.13)
NetGuite ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဒဟူးနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ NetGuide ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ NetGuide ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ NetGuide Journal Vol(2), Issue (86)ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 29 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
အမျိုးအစား: NetGuide Journal
24-May နောက်ဆုံးထွက် Android Application (15မျိုး) Selection
May-24 ရက်နေ့ ကနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Android Application 15မျိုးကိုစုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဗျာ။ ဟိုတနေ့ကတင်ပေးလိုက်တဲ့ 18မျိုးနဲ့မတူပါဘူး အသစ်တွေချည်းဘဲထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။
အားလုံးက အသုံးတည့်မယ့် Application တွေချည်းပါဘဲ။ Application တွေရဲ့ နာမည်နဲ့ Version အသေး
3D Design Battery Widget R3 v1.0
Adrian James 6Pack Abs Workout v3.0.0
AppMgr Pro III (App2SD) v3.11
Cloud SMS v2.1.13
DVD Profiler v1.0.1
edjing PRO DJ mixer turntables v1.2.1
Electrum Drum MachineSampler v4.7.2
GrooVe IP v1.3.9
K-@ Mail Pro - email evolved v1.32
My Alarm Clock v1.2
Next Launcher 3D v1.32
Photo Transfer App v2.5.1
Sliding Messaging Pro v6.051
Smart Cover v3.3.1
Week Calendar v1.0.2
Zapya ထက် နှစ်ဆမြန်တဲ့ Flash Transfer v1.3.0125 For Android
Android OS အချင်းချင်း Data တွေကို အပြန်အလှန် Transfer လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Flash Transfer ဆိုတဲ့
Application လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Zapya ထက်တောင်မှ နှစ်ဆမြန်တယ်ဆိုတော့ဗျာ စဉ်း
စားသကြည့်ကြပါတော့။ Bluetooth ထက် Zapya က အဆပေါင်းများစွာမြန်တာကိုလူတိုင်းသိကြမှာပါ။ အဲဒီ
Zapya ထက်ကို နောက်ထပ်နှစ်ဆမြန်တယ်ဆိုတော့ အချိန်ကုန်အများကြီးသက်သာသွားတာပေါ့ဗျာ။
အသုံးပြုပုံကတော့ ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူးဗျာ လွယ်ပါတယ် Zapya နဲ့ အတူတူပါဘဲ။
Android Battery Virus သတိပေးချက်
Android ဖုန်းအသုံးပြုနေသူများသို့ Android Battery Virus အကြောင်းအသိပေးပါရစေ
ဖုန်းအတွင်း Internet အသုံးပြုခြင်း Buletooth များအသုံးပြုခြင်း တို့ကြောင့်အများဆုံး
၀င်ရောက်ပါတယ်..အဓိက ပြန့်နှံ့တာကတော့ အင်တာနက်ကနေဖြစ်ပါတယ်
Android ဖုန်း အသုံးပြုနေသူ User များရဲ့ Android Battery စနစ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ Virus
ဖြစ်ပါတယ်.. ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုရင် ဒီ Virus ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်
ခံရသည့် Android Phone ရဲ့ Battery ဟာ အရင်လောက် အား ( Power ) သက်တမ်း
ကြာရှည်မခံတော့ခြင်း ၊ Battery အကုန်မြန်စေပြီး Battery ကုန်လို့အားသွင်းလိုက်ရင်လည်း
ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ်ဖြင့် Battery အားပြည့်ကြောင်းပြခြင်း ၊ သုံးလိုက်ပါက ချက်ချင်းကုန်သွား
ခြင်း ၊ အဆိုးဆုံးအဆင့်တွင် Virus Attack ဖြစ်နေတဲ့ Android ဖုန်းမှာလုံးဝ Battery သုံးမရ
တော့ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်.. ဒီ လိုမျိုး ကြုံတွေ့လာရပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ Antivirus
တင်ထားလဲ ခဏတာသာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး လုံးဝ သတ်ပစ်ဖို့တော့စွမ်းဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်
ပါဘူး..ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ရင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းက ဖုန်းရဲ့ SD Card ကို Format ချပစ်ပါ
ပြီးတာနဲ့ မိမိရဲ့ဖုန်းကို Factory Reset ချပစ်ပါ SD Card များကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လဲလှယ်
အသုံးပြုခြင်း တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပါ လို့ အသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Android , Information
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... Facebook အကြောင်း သိကောင်းစရာများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကလေးကို နည်းပညာစာအုပ်များစွာ မျှဝေ ရေးသားပေးသော ကီးကီး မှ ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး စတင်အသုံးပြုပုံမှအစ သိသင့်သိထိုက်သော အချက်များနှင့် အသုံးပြုနည်းများစွာကို အသေးစိပ် ရေးသားဖော်ပြပေးထားပါတယ်...
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 ကို Root မလုပ်ပဲ မြန်မာဖောင့်ထည့်မယ်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Samsung Galaxy S4 GT-I9500 ကို Root မလုပ်ပဲ မြန်မာဖောင့်ထည့်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ
အတွက် နည်းလမ်းလေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးလိုအပ်မဲ့ဖိုင်တွေကိုဒေါင်းပါမယ်။
ဒေါင်းလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ setting ထဲက more ထဲက Permissions အောက်က Security ထဲက Unknown sources ကို အမှတ်ခြစ်ပါ။ ပြီးရင် usb debugging ကိုလည်းအမှတ်ခြစ်ပါ့မယ်။ ရှာမတွေ့ရင် setting>>more>>about device>>build ဆိုတဲ့စာသားလေးကို ( ၇ ) ချက်လောက်နှိပ်ပြီး back key လေးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။ Date and time နဲ့ About device ရဲ့ ကြားထဲမှာ Developer options ပေါ်လာမှာပါ ။ပြီးရင်အဲဒီထဲကို ၀င်ပြီး usb debug ကို အမှတ်ခြစ်လုပ်နိုင်ပါပြီ။အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားသောဖိုင်သုံးဖိုင်ကို install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ setting >> My device >> Display ထဲဝင်လိုက်ပါ။ပြီးရင် Font Style ထဲကို ၀င်ပြီး အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Samsung Sans ဖောင့်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ Setting–>>My device–>> Language and input–>>Frozen keyboard Pro ကိုရွေးပေးထားပါ။
ထို့နောက် Dafault ကိုလည်း Frozen Zawgyi Keyboard Pro ကိုရွေးပေးထားပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ install လုပ်ထားတဲ့ ifont ဆိုတဲ့ icon လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ အပေါ်ဆုံးတန်းမှာ Install ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါ။ အောက်မှာကျလာပါလိမ့်မယ် မိမိနှစ်သက်ရာမြန်မာဖောင့်ကိုရွေးပါ ဥပမာ (Myanmar + SoMa ) ကိုရွေးပြီး install လုပ်ပါ set ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ OK လို့ပေါ်လာရင်နှပ်လိုက်ပါ။ Device က reboot လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလာပါလိမ့်မယ် အဲဒီအခါကျရင် ပါဝါကီးလေးကို ဖိထားပြီး Restart ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ပြန်တတ်လာပြီးဆိုရင်တော့ facebook , Tango , Viber ,contacts တွေမှာမြန်မာလိုပေါ်နေပါပြီ ရိုက်လို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ် facebook မှာဆိုလည်း မမှားသလောက်ပါပဲ အတော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ ။ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးသားဖြစ်လို့ စိတ်ချလက်ချ ပြုလုပ်ပါခင်ဗျာ။ မရရင်တော့ အစကနေနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Call Recorder (Full) v2.7.3 For Android
MC: အကို ကျွန်တော့်ကို Android ဖုန်းတွေအတွက် Call Recorader Software လေးတစ်ခုလောက်တင်ပေးပါလား သုံးတာများနေပြီ မကိုက်လို့ ကောင်းတာလေးနော် အကို
Cbox မှာတောင်းထားတာလေးတွေ့လို့ လိုအပ်တဲ့အခြားသာသူငယ်ချင်းများလည်း အသုံးပြုနိုင်အောင်
မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒါလေးနဲ့ဘဲအသုံပြုနေတာ အဆင်ပြေနေပါတယ်ဗျာ။
MC ရေ အဆင်မပြေရင်လည်း ကွန်မန့်လေးချန်ထားခဲ့ဦးနော်။ နောက်တစ်မျိုးထပ်တင်ပေးပါ့မယ်။ ဒီ
ကောင်လေးကို အသုံးပြုဖို့အတွက် Android OS 2.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာသာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (၁၄) အမှတ် (၂၀) (28.5.13)
အင်တာနက်ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တနင်္လာ တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အင်တာနက်ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ အင်တာနက်ဂျာနယ်
၀ယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (၁၄) အမှတ် (၂၀)ကို တင်ပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 28 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက်အဆင် မပြေ
Network LookOut Administrator Professional v3.8.10 + Keygen
Networking သမားများအတွက် အသုံးတည့်စေမယ့် Network LookOut Administrator v3.8.10 ကိုမျှဝေ
ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Software နဲ့ Network ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Client Computer
တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို မိမိကွန်ပြူတာကနေပြီး ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အင်တာနက်
ဆိုင်တွေမှာ ပိုပြီး အသုံးများပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အကြမ်းမျဉ်းလောက်ဘဲ ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်
ဗျာ။ ဒီထက်ပိုပြီး အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်နော်။ ဒါမျိုးကို
တင်တဲ့ ဆိုဒ်က နည်းနည်းလေးရှားလို့ တွေ့တုန်းလေးယူထားလိုက်ပါနော်။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Keygen ကိုပါထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Network , Software
Facebook ကနေ Free Call ခေါ်ဆိုပေးနိုင်တဲ့ Saytya Free Caller (Android , IOS , Window )
Facebook အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ Facebook ပေါ်ကနေပြီး Free Call ခေါ်ဆိုပေးနိုင်တဲ့ Application လေး
တစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Facebook Account တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Application
လေးကို အသုံးပြုပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Viber လိုမျိုး Code စောင့်စရာမလိုပါဘူး Install လုပ်
ပြီးအသုံးပြုရုံပါဘဲ။ Viber ထက်ပိုကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ Phone To Phone , Phone To PC , PC to PC
ခေါ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Device အားလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်အောင် Android OS , IOS , Window OS ,
MAC OS အတွက် ခွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Free Call တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး Free Chatting
အမျိုးအစား: Android , Android Application , Facebook
နောက်ဆုံးထွက် Android Application (18မျိုး) Selection
Android OS အသုံးပြုသူတွေအတွက် နောက်ဆုံးထွက် Version တွေကိုဘဲ စုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါ
တယ်ဗျာ။ Application စုစုပေါင်း 18 မျိုးအထိပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ 18မျိုးစလုံးကတော့ အသုံးတည့်
စေမယ့် Latest Application တွေကိုဘဲစုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Application တွေရဲ့ နာမည်နဲ့
Alarm Clock Pro v1.0.9
Android Tuner v0.9.3
Concept key lime pie HD7in 1 v2
GuitarTapp PRO - Tabs & Chords v2.8.9
Just6Weeks v1.8.1
Quickly Notification Shortcuts v1.0.1
RoboVox - Voice Changer v1.6.3
Super Keyboard Pro v1.7
Minimal UI Go Nova Apex Theme v1.5
Mobile Counter Pro - 3G, WIFI v3.2
Origami Live Wallpaper v1.11
Next Launcher 3D v1.31
GPS Navigation & Maps +offline v3.0
VNC Viewer v1.2.6.109857
Now Playing Music Player v1.2
Dr.Web Anti-virus Life license v8.00.0
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue3(27.5.13)
Digital Life ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဒဟူးနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Digital Life ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Digital Life ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Digital Life Journal Vol(2), Issue (3)ကို တင်ပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 27 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue 104 (27.5.13)
Mobile Guide ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဒဟူးနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Mobile Guide ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Mobile Guide ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Mobile Guide Journal Vol(2), Issue (104)ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 27 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Video downloader v 0.4.21 For Android
Android Phone နဲ့ Tablet တွေအတွက် Facebook ပေါ်က Video တွေကို အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်ဆန်ဆုံး
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပေးနိုင်တဲ့ Application လေးတစ်ခု မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်စမ်းပြီးဒေါင်း
လုပ်ဆွဲပြီးမှ တော်တော်လေးကောင်းလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ဗျာ။ အခု Application လေးကို အသုံးပြုဖို့အတွက် Android OS 2.3.3 တော့အနည်းဆုံးရှိထားဖို့လိုအပ်ပါ
အမျိုးအစား: Android , Android Application , Downloader , Facebook
MobileGo for Android v3.2.0.215 + Patch
Android User တိုင်းနဲ့ Service သမားတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Software လေးတစ်ခုမျှဝေပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Music , Video , Application , Game , Call Log , SMS , စတာတွေကို လွယ်ကူစွာ
ကွန်ပြူတာနဲကချိတ်ဆက်ပြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အသွင်းအထုတ်ဆိုတာက အလွယ်
ပြောလိုက်တာပါ။ Install / Uninstall လုပ်တာကိုပြောတာပါ။ Android Phone ထဲမှာရှိသမျှ အရာအားလုံး
ကိုလည်း Backup/Restore လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင်တော့ Android ဖုန်းတစ်ခုလုံးကို PC
ကနေပြီးကြိုက်သလို Manage လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Android , Software
Password Depot Professional v7.0.5 + Crack
အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့် Software လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့လို Online မှာ မွှေနှောက်နေတဲ့သူ
တွေ ၊ Website တွေမှာ Register လုပ်ထားသူတွေ ၊ Online Bank Account ရှိသူတွေအတွက်တော့ တော်
တော်လေးကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ Software လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးက မိမိမှာရှိတဲ့ Password တွေ
ကို အခြားသူများခိုးယူခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အထူးသဖြင့် Keylogger ရဲ့ Data တွေခိုးယူ
ခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုတော့အောက်ကမူရင်းဆိုဒ် ကနေပြီးရှင်းပြပေးထား
- Best protection of your data due to double encryption with Rijndael 256! Your password list is protected twice: with the master password and with an internal key.
- Protection from keylogging (intercepting of keystrokes) ??“ All password fields are internally protected from keylogging.
- Password Depot leaves no trace of your passwords in the RAM. So even an attempt byahacker to use your computer and try to browse the cryptic memory dumps for passwords -atheoretical option - would be defeated.
- Clipboard protection ??“ Password Depot automatically detects any active clipboard viewers and masks its changes to the keyboard; after performing auto-complete, all sensitive data is automatically cleared from the clipboard.
- The integrated password generator creates virtually uncrackable passwords: instead of passwords like "sweetheart" or "John", which can both be cracked inafew minutes, you now use passwords like "g\_/:1bmV5T$x_sb}8T4@CN?\_A:y:Cwe-k)mUpHiJu:0md7p@
- Friendly and easy-to-use interface, similar to the Windows Explorer, that allows you to navigate the password lists.
- Top bar window for faster and more efficient navigation. Now available in classic design or as application desktop toolbar
- Auto-complete action that allows you to automatically complete fields onaweb page with user name and password.
- Supports Firefox, Netscape, Opera and Microsoft Internet Explorer.
- Password lists on the internet: Place your encrypted password lists on the Internet and enjoy access to all of them, no matter where you are!
- Import/export of passwords from/to other password managers.
- You can openapassword's website directly from the program.
- Copy password, user name or URL to clipboard or drag & drop to the target field.
- Integrated server module: Share Password Depot with several users onalocal network!
- Support of USB flash drives: Keep your passwords handy all the time by storing Password Depot and your passwords onaUSB flash drive.
- Custom fields: Create as many fields as you like in the database. That way you can adjust Password Depot to your personal needs.
- Recognition of correct passwords: The program recognizes automatically the password that is used forawebsite and suggests it automatically!
- New wizards: Add web passwords using the wizards. Or install Password Depot onaUSB flash drive with the help of the wizards.
- Perfect local security: you can use the lock function to restrict other user's access to your personal passwords.
- Quality inspection of your passwords: Check the quality and security of your passwords! New and intelligent algorithms check the passwords employed and alert you in case of "weak??? passwords.
- Encrypt external files with Password Depot to make secret documents inacessible for unauthorized persons.
- Erase external files completely so that there are no traces left on your hard disk.
- Variables in URLs: Use variables in URLs to meet all the requirements and to automate special cases.
- Support of TANs: Support of TANs was added for customers who are using Password Depot for online banking.
- Password policies: You can define rules which all new or modified passwords have to fulfill (minimum length, types of characters contained, etc.).
- New program options: Thanks to the numerous new program options Password Depot is individually configurable.
Adinnwa မှ မြန်မာငွေများကို ရေလိုရအောင်ယူနည်း ( EBook - မြန်မာလို )
ကိုယ်ပိုင် Website ရှိသူများအနေဖြင့် www.adinnwa.com ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်..အခု ဒီ Adinnwa.com
မှ မြန်မာငွေများကိုရေလို ယူနည်းစာအုပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...ဒီနေရာမယ် တစ်ခုသတိပေးချင်တာက.
စာအုပ်ထဲမယ် တစ်နေ့ကို 2000 ကျပ်လောက် ရအောင်ယူပါဆိုပြီး ပါပါတယ်..အဲဒီနေရာမှာ 1000 ကျပ်ဘဲ
ရအောင် ယူပါ လို့ပြင်ပေးပါ...ခဏလေးနဲ့ ငွေရတဲ့နည်းဖြစ်ပြီး လုပ်ရင်လုပ်သလောက် သောင်းဂဏန်းအထိ
ရပါလိမ့်မယ်..ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ကို 1000 ကျပ် ထက်ပိုအောင် မလုပ်ပါနဲ့...ကျနော်ကိုယ်တိုင်တစ်နေ့ကို
တစ်ထောင် ကျော်မက တစ်နေ့အတွင်း 20000 ကျပ်အထိရအောင်လုပ်လိုက်မိလို့ Accounts Block ခံထိပြီး ရထားတဲ့ ငွေများလည်း ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ဖူးပါတယ်..ဒါကြောင့် လောဘကိုသတ်ပြီး တစ်နေ့ကို 1000 ကျပ်ဘဲ ၇အောင်ယူပါ..ဒီနည်းလမ်းက ကိုယ်ပိုင် Website ရှိသူများနှင့် Website ပိုင်းဆိုင်ရာများကိုလုပ်ကိုင်
နေသူများအတွက် ငွေရှာနည်းဖြစ်ပါတယ်..တွေးရင်တွေးတတ်သလို ပိုက်ဆံအန္တရာယ်ကင်းကင်း နဲ့ပိုက်ဆံ
ရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခင်မျာ... Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ။
Download=>Link 1 / Link2/ Link 3
If you like my post,please visit at www.mmithelper.com
GTA Vice City Full Version 1.0.3 For Android Game
GTA Vice City ဆိုတဲ့ Game ကတော့ လူကြီးလူငယ်မရွေးသိပြီးသား Game ဖြစ်မှာပါဗျာ။ PS2 မှာကတည်း
ကလူသိများ လူကြိုက်များပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ Game တစ်မျိုးပါ။ ပြီးတော့ PC အနေနဲ့ ထွက်လာတဲ့အခါမှာ
လည်း PS2 ကလိုဘဲ လူကြိုက်များနေတုန်းပါဘဲ။ ကဲဗျာ အခုအချိန်မှာတော့ Android , Tablet ခောတ်ဆို
တော့လည်း Andriod OS မှာ ကစားနိုင်တဲ့ GTA Vice City Android Version ဆိုပြီး ထွက်လာပြန်ပါတယ်။
Android အတွက်ထွက်တာတော့ လပိုင်းလောက်ရှိနေပါပြီ အခုမှဘဲ တင်ဖြစ်သွားတာပါဗျာ။ PC နဲ့ PS2
မှာကစားရသလိုဘဲ Android မှာလည်းဒီထက်မနိမ့်တဲ့ ရုပ်ထွက်တွေ နဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Game
အကြောင်းကိုတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်
ဖုန်းများမှာသာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Apk ဖိုင်ကို Install လုပ်ပြီး Download File မှာပါလာတဲ့ obb file
ကို Phone ရဲ့ SD card ထဲကိုကူးထည့်ပြီးမှ ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Instruction: Extract Zip, Install apk and put data on Sdcard\_
▼ 2013 ( 2063 )
▼ May ( 146 )
ဇော်ဂျီ နဲ့ Unicode Font မလိုဘဲ မြန်မလိုဖတ်နိုင်တဲ...
CCleaner Professional and Business Edition v4.02.4...
iCare Data Recovery (Professional & Enterprise) v...
RegawMOD EVO 4G LTE Rooter သုံးပြီး HTC EVO 4G LTE...
Universal Document Converter v5.7.1305.21160 + Ke...
USB တွေကို Format ရအောင်ချပေးမယ့် USB Flash Drive ...
Compress ဖိုင်အမျိုးအစားပေါင်း (၂၀) ကျော်ကို Unpak...
Zapya ထက် နှစ်ဆမြန်တဲ့ Flash Transfer v1.3.0125 Fo...
Network LookOut Administrator Professional v3.8.10...
နောက်ဆုံးထွက် Android Application (18မျိုး) Select...
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue3(27.5.1...
Adinnwa မှ မြန်မာငွေများကို ရေလိုရအောင်ယူနည်း ( EB...
Netguide Journal Vol (2), Issue (85) (22.5.13)
USB Disk Security 6.3.0.0 Full
Bass Booster Pro v2.1.1 For Android
ကီးခလုတ်တွေ နှိပ်စရာ မလိုဘဲ Recovery Mode ကို ဝင်ရ...
Driver Genius 12 Full Version Pre Activated ( 14 M...
Second ပိုင်းအတွင်းမှာ ဓါတ်ပုံများစွာရိုက်ယူနိုင်တ...
Android User များနဲ Service သမားများရှိထားသင့်တဲ့ ...
Phone ငွေဖြည့်ကဒ် Crack လုပ်နည်း ( EBook - မြန်မာလ...
3D City Run2Unlimited Money 1.0 For Android Game...
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue 103 (13.5.13)
Digital Life Journal အတွဲ-၂ ၊ အမှတ် - ၂ (19.5.2013...
MailWasher Pro 2013.7.1.0 Full with key
Glary Utilities Pro v3.3.0.112 (5/16/2013)full wit...
Driver Genius Professional 12.0.0.1306 Full Versi...
DisplayFusion Pro v5.0.1 full with keygen
Avira Rescue CD Always latest Version and How to U...
PaperScan Professional 1.8.0.7 full with keygen
Folder Protect 1.9.5 full with patch/keygen
High-Logic FontCreator Professional Edition 7.0.0....
Wondershare MobileGo for Android 3.2.0.215 Full
ဥပဒေစာအုပ်များ - အပိုင်း (၇)
ဖောက်ထွင်းစရာ Hack Tools 155 ခုပါတဲ့ UltraHackers ...
Epson L110 L210 L300 L350 L355 Resetter နှင့် Rese...
CPU Speed Professional v3.0.4.3 Protable
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ သိသင့်သော ဗုဒ္ဓဂယာ သမိုင်းအကျဉ်း.
WWF-Smackdown-2 For Android Game
K-Lite Codec Pack Update v9.9.2 Build 20130504
Sony Xperia SP ကို JellyBean (Android V4.1.2) တင်၍...
Tenorshare Card Data Recovery v4.0.1.2013.3.20 + C...
Supreme Heroes APK V.1.0.2 For Android Game
Boxoft Screen Video Capture v1.6.0 + Serial
Music Alarm Pro v2.3.0.6 + Crack
SUPERAntiSpyware Pro v5.6.1016 + Keygen
Hacking မှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ထဲမှာတစ်ခုပါတဲ့ A...
Internet Download Manager 6.15 Build 12 + Patch & ...
UnRar Pro-v1.5c For Android
Virtual Box ကိုအသုံးပြုပြီး .iso File အားမူလ Windo...
Windows Essentials 16.4.3508.0205
ဥပဒေစာအုပ်များ - အပိုင်း (၆)
Twin Me v1.3.2 ကိုသုံးပြီး Android Device နဲ့ နှစ...
WONDERSHARE DVD SLIDESHOW VERSION 6.1.12 + Crack
Netguide Journal Vol (2), Issue (84) (15.5.13)
UltraISO Premium Edition 9.5.3.2855 + Keygen
IOS တွေအတွက် Jailbreak အသစ်ထွက်ပြီ Evasion 1.5.1
Password လား? ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်
3D Design အလန်းကြီးတွေနဲ့ Next Launcher (1.30) Ful...
Wondershare Video Converter Ultimate 6.5.0.5 Final...
အင်တာနက်ဂျာနယ် (၁၃.၅.၁၃) အတွဲ (၁၄) အမှတ် (၁၈)
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue 102 (13.5.13)
Advanced Installer Architect 10.1 Build 51253 + Cr...
“ နှေးကွေးနေတဲ့ သင့် Laptop ကို မြန်ဆန်အောင်လုပ်ပေ...
Digital Life Journal အတွဲ-၂ ၊ အမှတ် - ၁ (12.5.2013...
NTFS To FATA 32 Winzard Pro 2.3.1 Full Version ( 2...
Real Football 2013 v.1.0.6 For Android
WiFiSlax 4.3 Full (WiFi Hacking BootCD) Wifi Passw...
ဥပဒေစာအုပ်များ - အပိုင်း (၄)
သေးပေမယ့် Virus သတ်ရာမှာ အစွမ်းထက်တဲ့ Smadav 2013 ...
STREET FIGHTER4Full Version 1.0001 APK + DATA Di...
အင်တာနက်နှင့်အီမေးလ် အဆင့်မြင့် လက်တွေ့အသုံးပြုနည်...
GameBoost 2.5.6.2013 Final Full Version (4MB )
ဥပဒေစာအုပ်များ - အပိုင်း(၃)
Free All Premium Accounts , Premium Cookies, Premi...